🥇 ▷ Xusuusnow Shaqada 10 waxay yeelan doontaa shaashad weyn, laakiin baatarigu wuxuu joogi doonaa dhererkiisa ✅
Xusuusnow Shaqada 10 waxay yeelan doontaa shaashad weyn, laakiin baatarigu wuxuu joogi doonaa dhererkiisa
Waxaan horeyba wax badan uga ogaannay Xusuus-qorka Maamuusta ee 10, in kasta oo shirkadda Shiinaha aysan wali si rasmi ah u soo bandhigin. Xogta ku xigta wararka xanta ah ee usbuucyadii la soo dhaafay waxay durba bixiyeen sawir sax ah oo xaaladda ku saabsan, illaa iyo haddana wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya hay’adda Shiinaha. TENAA waxaa loo tixgelin karaa inay tahay xaqiijin kale oo ah wixii horay loo muujiyay.
Waaxda shahaadada ayaa ka diiwaan gashan aaladda cusub ee sharafta xogteeda, ayaga oo shaaca ka qaaday dhammaan faahfaahinta farsamada. Sidii horey loo soo sheegay, Xusuus-qorka 10-aad wuxuu noqon doonaa taleefano gacmeed weyn, mahadnaq balaaran AMOLED ka 6,5 inji si loo xaliyo HD buuxa + (1,080 x 2,220 pixels). Gudaha waa inuu jiraa SoC 2.4 GHz octa-core – malaha Kirin 970/975 – oo ay weheliyaan 6/8 GB of RAM e 64/128/256 GB xusuusta gudaha, waxay kuxirantahay qaabeynta la doortay.
Qalabka noocan oo kale ah wuxuu soo rogayaa cabbir muhiim ah: cabirrada Qoraalka 10 waa inuu ahaadaa 177 x 85 x 7.65 mm, culeys ah 230 garaam, laakiin gudaha waxaa sidoo kale jiri doona batari ka socda ceel 4,900 mAh.
Xogta kaamirooyinka ayaa sidoo kale ah mid aad u xiiso badan. Dhabarka waxaan ka heli doonnaa labo-cam da 24 + 16 MP, halka dhanka horena ay jirto optic leh dareemayaal ka socda 13 MP. Sidoo kale indhaha ayaa caawin doonasirdoonka macmal waxaa soo saaray Huawei iyo Honor, inta hartay qeybta softiweerka waxaa lagu saleyn doonaa Android 8.1 Oreo.
AKHRISO: Sawirrada tooska ah ee Xusuusta Mudnaanta 10
Maaddaama laga yaabo inaad si cad u maleysey, waa qaab aad u sarreeya oo leh tanaasul yar, taas oo qaar ka dhigaysa qaar cabbirrada la buunbuuniyey qaabkeeda u gaarka ah. Si aan u ogaano bal in macluumaad badan oo daadadku ay ku soo daateen calaamadda, waa in aan dhawr toddobaad oo kale sugnaa: Sharafta ayaa go’an soo bandhigid rasmi ah 30ka Agoosto ee soo socda, taas oo naga dhigaysa inaan ka fikirno in soo-saaridda dhacdada ay noqon karto Xusuus-qorka 10-aad.